(trg)="2.1"> ထိုအနုပညာရပ်မျိုးမှာ တစ်ခါတရံတွင် လူသိမခံရသော်လည်း ၊
(trg)="2.4"> လက်ရှိစီးပွားပျက်ကပ်တွင် ဂရပ် ( ဖ် ) တီအနုပညာမှာ လူမှုရေးလိုအပ်ချက်အရ အလေ့အထသဖွယ်ဖြစ်လာပြီး ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ၊
(trg)="2.5"> မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်ဘဝ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်လာသည် ။
(trg)="5.1"> ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ကာရာကတ် ( စ် ) ရှိ အဆောက်အဦးတစ်ခု အပြင်ဘက်တွင် ပိုက်ဆံများ ပံျသန်းနေပုံ ။
(trg)="7.1"> လန်ဒန်ရှိ အကျပ်အတည်းများကို အန်ထုတ်နေခြင်း ။
(trg)="1.2"> နို်င်ငံပိုင်လမ်းမများ စာရင်း
(trg)="1.3"> ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက နို်င်ငံပိုင်လမ်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို သတ်မှတ်ပြထားတဲ့ စာရင်းတစ်ခုကို တင်ခဲ့ပါတယ် ။
(trg)="6.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်ပါမည် ၊
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို့ ၊
(src)="3.6"> نؤمن ونعتقد أن إنترنت مفتوح وحر يمكن أن يجعل العالم أفضل .
(trg)="4.3"> တချို့ ​ တွေ ​ က ကျွန်တော် ​ တို့ ​ ရဲ့ လေ ​ တပ် ​ စွမ်းအား ​ က လေ ​ ပဲ ​ ရှိ ​ ပြီး စွမ်းအား ​ မ ​ ရှိ ​ ဘူး ​ လို့ ဖော် ​ ပြ ​ ကြ ​ တယ် ။
(trg)="4.5"> ဒါ ​ တွေ ​ ကို ဒီ ​ အတိုင်း ​ ဆက် ​ ဖြစ် ​ နေ ​ မှာ ​ ကို ကျွန်တော် ​ တို့ အနေ ​ နဲ့ ခွင့် ​ မ ​ ပြု ​ နိုင် ​ ဘူး ။
(trg)="4.10"> ကြံ့ခိုင် ​ တဲ့ သယ်ယူ ​ ပို့ဆောင် ​ ရေး ရဟတ် ​ ယာဉ် လေး ​ စီး ၊
(trg)="4.11"> ရေ ​ ဒီ ​ ယို ​ နဲ့ အခြား ​ ဆက် ​ သွယ် ​ ရေး ကိရိယာ ​ ပစ္စည်း ​ တွေ ၊
(trg)="4.13"> မော် ​ တာ ​ စက် ​ သေ ​ နတ် ​ တွေ ၊
(trg)="4.15"> လာ ​ မယ့် ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၃ ​ မှာ တိုက်ခိုက် ​ ရေး ရဟတ် ​ ယာဉ် ဆယ် ​ စီး ၊
(trg)="4.16"> ရေး ​ ကြောင်း ​ သုံး ရဟတ် ​ ယာဉ် ​ နှစ် ​ စီး ၊
(trg)="4.17"> အသေး ​ စား ​ လေ ​ ယာဉ် ​ နှစ် ​ စီး ၊
(trg)="4.18"> ဖ ​ ရီး ​ ဂိတ် ​ စစ်သင်္ဘော တစ် ​ စီး ၊
(trg)="4.20"> သို့ရာတွင် ထို ​ စစ် ​ လက်နက် ​ အသစ် ​ များ ​ ကို ဝယ် ​ ယူ ​ ဖြည့်တင်း ​ မှု ​ များ ​ သည် စစ် ​ ပြု ​ ရန် ရှေး ​ ရှု ​ ခြင်း ​ မဟုတ် ​ ကြောင်း ရှင်းလင်း ​ ပြော ​ ကြား ​ သွား ​ ခဲ့ ​ သည် ။
(trg)="4.21"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ က ရန်လို ​ တဲ့ ​ သူ ​ ဖြစ်လာ ​ ဖို့ ဒီ ​ ဟာ ​ တွေ ​ ကို လုပ် ​ နေ ​ တာ ​ မဟုတ် ​ ပါ ​ ဘူး ၊
(trg)="4.22"> တင်းမာ ​ မှု ​ တွေ မြင့် ​ တက် ​ လာ ​ အောင် လုပ် ​ နေ ​ တာ ​ လည်း မဟုတ် ​ ပါ ​ ဘူး ။
(trg)="4.23"> ဒါ ​ က ငြိမ်း ​ ချမ်း ​ ရေး ​ ကို ထိန်းသိမ်း ​ ဖို့ ​ ပါ ​ ပဲ ။
(trg)="4.25"> မ ​ ဖြစ် ​ နိုင် ​ ဘူး ​ လို့ အကြာ ​ ကြီး ​ တွေး ​ မိ ​ ခဲ့ ​ တဲ့ ​ ဟာ ​ ပေါ့ ။
(trg)="4.27"> အဘယ် ​ ကြောင့် ​ ဆိုသော် နိုင်ငံ ​ တွင် တိုက်ခိုက် ​ ရေး ​ လေ ​ ယာဉ် လတ် ​ တ ​ လော ​ တွင် တစ် ​ စီး ​ မျှ မ ​ ရှိ ​ သော ​ ကြောင့် ဖြစ် ​ သည် ။
(trg)="5.5"> ရေတပ် ​ အချင်းချင်း စေလွှတ် ​ မှု ၊
(trg)="5.7"> ကာ ​ ကွယ် ​ ရေး ​ နည်း ​ ပညာ ​ နှင့် ဗ ​ ဟု ​ သုတ ဖ ​ လှယ် ​ မှု ၊
(trg)="6.2"> လေ့ကျင့် ​ ရေး ​ နှင့် လုပ်ဆောင် ​ မှု ​ များ ၊
(trg)="6.7"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ ကို ကောက်ရိုး ​ မျှင် ​ တွေ လာ ​ မ ​ ဆွဲ ​ ခိုင်း ​ ပါ ​ နဲ့ ။
(trg)="6.8"> ကျွန်တော် ​ တို့ လုံ့လ ​ စိုက် ​ ထုတ် ​ ရ ​ ပါ ​ မယ် ။
(trg)="6.9"> အမေ ​ ရိ ​ ကန် ​ ပြည်ထောင် ​ စု ​ နှင့် ဖိ ​ လစ် ​ ပိုင်နိုင် ​ ငံ စစ်သည် ​ များ ​ အကြား စစ် ​ ရေး ​ လှုပ်ရှား ​ မှု ​ များ ​ ကို ပြသ ​ သည့် မြေပုံ ။
(trg)="6.10"> ဓာတ် ​ ပုံ - အီ ​ ဘွန်
(trg)="7.4"> မတတ် ​ နိုင် ​ ဘူး ၊
(trg)="7.5"> ကိုယ့်ဟာ ​ ကိုယ် မေးခွန်းထုတ် ​ ကြ ​ ရ ​ မယ် ၊
(trg)="7.7"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ မှာ ဒီ ​ လို ​ ပုံစံ ​ တွေ အများ ​ ကြီး ​ ရှိ ​ တယ် ၊
(trg)="7.10"> ဒီ ​ ပူ ​ ပေါင်း ​ ဆောင်ရွက် ​ မှု ​ အတွက် ဘယ် ​ မတော်တဆ ပစ်ခတ် ​ မှု ၊
(trg)="7.11"> မှားယွင်း ​ တွက်ချက် ​ မှု ​ တွေ ​ ပဲ ဖြစ် ​ ဖြစ် ဒေသ ​ တွင်း ​ ပ ​ ဋိ ​ ပ ​ က ​ ၡ ​ တွေ ​ အတွက် အကြောင်းပြ ​ ချက် ​ တစ် ​ ခု ဖြစ်လာ ​ နိုင် ​ ပါ ​ တယ် ။
(trg)="7.14"> တက် ​ ကြွ ​ လှုပ်ရှား ​ သူ ​ တစ် ​ ဦး ​ ဖြစ် ​ သော အာနိုး ( လ် ) ပ ​ ဒီ ​ လာက သူ့ ​ အမြင် ​ ကို မျှဝေ ​ သွား ​ သည်မှာ
(trg)="2.1"> အစိုးရဝန်ကြီးကားလို့ ( စ် ) ရိုမီရိုမှ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကို ဦးဆောင် ၍ သယ်ပို့ခဲ့သည် ။
(trg)="4.2"> ဆိုပိုကာချီ ၌ ယူရေနီယမ် ( ၂ ) တန်ကို ဖမ်းဆီးရမိစဉ် ။
(trg)="4.3"> ဓာတ်ပုံ - တွစ်တာအသုံးပြုသူ @ pagina _ sieteက တွစ်ပစ်တွင် ရှယ်ခဲ့သောပုံ
(trg)="5.1"> ထိုဖြစ်ရပ်အား သတင်းပို့လျက်ရှိသော သမားရိုးကျသတင်းဌာနများမှာ သတင်းအားလုံးကို ချက်ချင်းရယူနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့တာလုံး သတင်းပို့ခဲ့သည် ။
(trg)="1.1"> အီ ​ ဂျစ် ၊
(trg)="1.3"> အီဂျစ်လူမျိုး သမ္မတ မိုဟာမက် မော်စီ ဒီနေ့ညမှာ သူ့ရဲ့ဖွင့်ထားပြီးသား အကောင့်ကနေ တရားဝင် တွစ်တာစာတိုပို့ခြင်းကို စတင်လိုက်ပါတယ် ။
(trg)="1.4"> လိုက်ကြည့်သူပေါင်း ၁၆၂၀၀၀ရထားပြီးဖြစ်တဲ့ အဲဒီအကောင့်ကို တွစ်တာကလည်း ဒီနေ့ပဲ အကောင့်အစစ်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
(trg)="1.5"> သူရဲ့ပထမဆုံး တွစ်တာစာတိုကတော့ ၊
(trg)="1.6"> ပထမဆုံးတွစ်တာစာတိုကို # jan25 ( ဇန်၂၅ ) တော်လှန်ရေးနဲ့ ရဲရင့်တဲ့ # syrians ( ဆီးရီးယားလူမျိုးတွေ ) အတွက် အထူးပြုချင်တယ် .
(trg)="1.9"> မိုဟာမက် # Morsi ( မော်စီ )
(trg)="1.2"> စိတ် ​ မ ​ ကောင်း ​ ပါ ​ ဘူး ခရစ် ( စ် ) ရယ် ၊
(trg)="1.4"> ဤအပုဒ်သည် ၂၀၁၁လစ်ဗျားတော်လှန်ရေးအထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ။
(trg)="2.1"> အမေရိကန် သံတမန်များအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒပြရန် ယနေ့တွင် ဘန်ဟာဇီရှိ အယ် ( လ် ) ရှာဂျာရာ ရင်ပြင် ၌ လစ်ဗျားလူမျိုး လူတစ်စုက စုရုံးခဲ့ကြသည် ။
(trg)="4.2"> ကိုင်ရိုတွင်လည်း ဆင်တူသော ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများက အမေရိကန်သံရုံး ၏ နံရံများကို ဖျက်ဆီးပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအလံကို ဆုတ်ဖြဲကာ အစ္စလာမ်စာတန်းများဖြင့် အစားထိုးခဲ့ကြသည် ။
(trg)="5.1"> မစ္စတာ စတီဗင် ( စ် ) အပါအဝင် အခြား အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ထမ်း သုံးဦးကို သတ်ဖြတ်မှုက ယင်းဒေသရှိ ကွန်ယက်နိုင်ငံသားများကို အမျက်ထွက်စိတ်ပျက်စေခဲ့သည် ။
(trg)="8.1"> ဆန္ဒပြမှုမှ ဓာတ်ပုံများကို ဆာနယ်လာတင်ခဲ့သည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ။
(trg)="8.4"> # Benghazi ( ဘန်ဟာဇီ ) က မင်းကို အကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ။
(trg)="8.5"> ဘန်ဟာဇီရှိ ယနေ့ဆန္ဒပြမှုမှ ဓာတ်ပုံ
(trg)="9.1"> ဤအပုဒ်သည် ၂၀၁၁လစ်ဗျားတော်လှန်ရေးအထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ။
(trg)="1.5"> အကြောင်းမှာ ထိုပုဒ်မအတွက် လွှတ်တော်အမတ်အများစုက မဲပေးအတည်ပြုခဲ့ကြ ၍ ဖြစ်သည် ။
(trg)="2.2"> အသုဘအခမ်းအနားသဖွယ် ဆင်ယင်ထားသော ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆန္ဒပြသူများက အနက်ရောင်များ ဝတ်ထားကြသည် ။